यसरी सुरक्षित हवाईयात्रा गर्न सकिन्छ – Online Sunapati
मुख्य पृष्ठ /News/यसरी सुरक्षित हवाईयात्रा गर्न सकिन्छ
काठमाडौँ, ११ असार- ‘कृपया अब हामी बुद्ध एयरको उडान नं. ६०१ बाट पोखरा प्रस्थान गर्दैछौँ । बाह्र हजार फिटको उचाइबाट २५ मिनेटको यात्रापछि पोखरा विमानस्थलमा अवतरण हुनेछौँ ।यात्रु महानुभावहरु ध्यानदिनुहोला !
“कोभिड–१९ को महामारीबाट सुरक्षित रहनका लागि हवाई यात्रामा पालना गर्नुपर्ने सुरक्षा निर्देशन” कृपया आफ्नो सिटबेल्ट बाँधिदिनु होला, यात्रा अवधिभर मास्क र फेससिट लगाउनुहोला । उडानका बेला हिँडडुल नगर्नु होला, अति आवश्यक भएमात्र शौचालयको प्रयोग गरिदिनुहुन र पानीको वितरण पनि अति आवश्यक परेको खण्डमा मात्र उपयोग गरिदिनुहोला साथै उडान अवधिभर श्वासप्रश्वास सम्बन्धी केही समस्या भएमा, रिङ्गटा लागेमा विमानका कर्मचारीलाई जानकारी गराउनुहोला र विमानबाट ओर्लँदा चार–चार जना मात्र ओर्लनुहोला ।
बुद्ध एयरका प्रबन्ध निर्देशक वीरेन्द्रबहादुर बस्नेतले कोभिडको महामारीको अवस्थामा हवाई उडान गर्दा यात्रुलाई कसरी सुरक्षित गर्ने तथा बुद्ध एयरको सञ्चालनमा कोभिडको सङ्क्रमण नफैलियोस् भनेर अभ्यास गरिएको बताउनुभयो । ‘‘उडानमा सङ्क्रमित यात्रु पक्कै आउँछन् तर एक सङ्क्रमितबाट अर्कामा यात्रु तथा विमानका कर्मचारीमा नसरोस् भन्ने उद्देश्य हो । अबको ४० दिनमा उडान सञ्चालन हुने अपेक्षा गरेका छौँ, त्यसबखत उडान शुरु हुदाँ ९९ प्रतिशत सुरक्षित वातावरणका लागि आवश्यक सबै तयारी गरिएको छ’’, उहाँले भन्नुभयो ।
यात्रुले शुरुमा टर्मिनल भवन छिर्नासात् दुरी कायम गर्न बनाइएको घेराभित्र उभिएर लाइनबसी ज्वरो नाप्छन् । त्यसपछि सुरक्षापासको प्रक्रिया सकिन्छ । भित्र टिकट काउन्टरमा पनि सामाजिक दुरीका साथ बोडरिङ पास दिइन्छ । त्यहाँ काउन्टरका कर्मचारीले यात्रुलाई फारम भराउँछन् र मुहारसहितको परिचयपत्र मोबाइलबाट खिच्छन् अनी त्यसलाई कम्प्युटराइज गर्छन् । पाससँगै अर्को फाराम दिन्छन् उक्त फाराम यात्रुले भरेर जहाज चडेर ओर्लने बेला एयरहोस्टेजलाई दिनुपर्छ । पास लिएर अन्तिम सुरक्षा चाँचपछि यात्रु प्रतिक्षालय हुँदै सम्बन्धित गन्तव्यको उडानका लागि ¥याम्प बसभित्र छिर्छन् ।
यात्रुले विमानस्थलमा करिब एक घण्टाभित्र जहाज चड्नेसम्मका सबै प्रक्रिया पूरा गरिसक्छन् । सामान्य अवस्थामा एक घण्टा अघि यात्रुलाई टर्मिनल भित्र बोलाइन्थ्यो भने अब डेढ घण्टाअघिनै भित्र छिराइन्छ । अभ्यास उडानमा विमानस्थलका उच्च अधिकारी पनि सहभागी थिए । बुद्धले अहिले एटीआर–७२ ११ सहित १३ जहाजमार्फत उडान सेवा दिइरहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आन्तरिकतर्फ १० हेलिकोप्टरसहित १९ वायु सेवा कम्पनीले उडान भर्दैआएका छन् । (रासस)
राजस्थानबाट उत्तरपूर्व हावा चल्दै, सलह पुन: नेपाल आउने सम्भावना बढ्यो
बिना स्वीकृति फिल्म, म्युजिक भिडियोलगायतमा प्रहरीको पोसाक प्रयोग गर्न नपाइने